Hooyo naafo u noqotay badbaadinta Bisad yar oo halis ku jirta. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in La-yaabka September 27, 2017	0 239 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Hooyo saddex dhal ah ayaa laga yaabaa inaysan dib u socon kadib markii ay kasoo dhacday geed xilli ay badbaadinaysay bisad yar.
Previous: Mashruuc ila cun aniga oo dadka aan Muslimiinta ahayn lagu fahamsiinayo diinta Islaamka.
Daawo sawirrada — Aabe xal u helay inuu Wiilkiisa guriga ka bixin!
Berbera oo laga furay Maktabadii ugu horraysay oo ay yeelato muddo dheer.
Wadanka Botoswana oo ay kordheen tirada Dalxiisayaasha